सहुलियत पसलमा चामल बिक्री भएन:: Naya Nepal
वीरगञ्ज, २३ असोज: दशैँ तिहारलाई लक्षित गरी खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड शाखा कार्यालय वीरगञ्जले सहुलियत मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याएको एक साता भए पनि अहिलेसम्म एउटा ग्राहक आएका छैनन् । सहुलियतमा चामल बिक्री गर्ने कार्य शुरु गरे पनि हालसम्म बोहनीसमेत हुन नसकेको सो कार्यालयले जनाएको छ ।
शाखा प्रमुख विकास कटुवालका अनुसार स्टिम जिरा मसिनो चामल प्रतिकिलो रु ६५ मा पाउने चामलमा रु पाँच सहुलियत दिइएको छ । पसलबाट एक उपभोक्तालाई बढीमा ५० किलोसम्म चामल उपलब्ध गराइने छ । मङ्सिर ६ गतेसम्म सञ्चालनमा रहने उक्त सहुलियत पसलबाट २०० क्विन्टल चामल बिक्री गर्ने लक्ष्य लिइएको सूचना अधिकारी मुनिलाल कुशवाहले बताउनुभयो । सो सहुलियत पसलमा २५ किलोको र १० किलोको गरी दुईथरीका चामलका प्याकेट बिक्रीको लागि राखिएको छ ।
अनुपसँग अभिनय सिक्दै प्रदिप
नायक प्रदिप खड्का अहिले पोखरामा छन् । पोखरामा रहेर उनले कलाकार तथा निर्देशक अनुप बरालसँग तीन महिनाको अभिनय कोर्ष लिइरहेका छन् । उनले, अभिनयको कक्षा लिएको यो पहिलो पटक हो ।
नायक प्रदिप खड्का आफैमा राम्रो अभिनय गर्ने कलाकारमा पर्छन् । तर, पनि केही समय चलचित्रको कामबाट खाली बसेका प्रदिप अभिनय सिकेर आफूलाई झनै निखारिरहेका छन् ।
उनले, तीन महिनासम्म अनुपबाट अभिनयको कोर्ष एक्लै लिदैछन् । नायक खड्काले दैनिक ६ घन्टासम्म अभिनयको कोर्ष सिकिरहेका छन् । उनले, दशैंसम्म यो क्रम जारी रहने प्रतिक्रिया दिएका छन् । आफूलाई पहिलेदेखि नै अभिनय सिक्न मन लागेपनि त्यो मौका नमिलेको प्रदिपको तर्क छ । आफूलाई अभिनयका विभिन्न आयाम सिक्न मन लागेपनि व्यस्तताका कारण मौका नमिलेको र लकडाउनका कारण यो अवसर जुटेको प्रदिपको कथन छ ।
नायक प्रदिप खड्का अभिनित चलचित्र ‘प्रेमगीत ३’ रिलिजको लागि तयार छ । उनी, निर्देशक दिनेश राउतको चलचित्रमा काम गर्न तयार छन् ।
कोरोना भाइरस नेपाल: निजी बीमाकर्ताहरूले कहिला पाउलान् भुक्तानी
कोभिड-१९ को बीमा गरेका कैयौँ व्यक्तिहरूले बीमा कम्पनीहरूबाट भुक्तानी नपाएको बताइरहँदा तिनको छाता सङ्गठन र तिनलाई नियमन गर्ने निकाय दुवैले आगामी साताबाट उक्त प्रक्रिया थालिने बताएका छन्।
किन मर्‍यो आशा?
उनले थपिन्, “त्यसपछि उहाँहरूले वडाको सिफारिस चाहियो भन्नुभयो। म निको भएर राजधानी फर्किसकेकी थिएँ, तर एक्लिएर बुटवलमा बसेको ठाउँबाट कागजपत्र मगाएर बीमा कम्पनीलाई दिएँ। उहाँहरूले ‘हुन्छहुन्छ’ भनिरहनुभएको छ। तर मलाई भुक्तानी पाउँछु वा पाउँदिनँ थाहा छैन।”
के छ बीमकहरूको भनाइ?
उनका अनुसार अघिल्लो सातासम्म बीमा कम्पनीहरूले ९४३ वटा कोभिड-१९ सँग सम्बन्धित दाबी तिर्ने क्रममा लगभग पौने नौ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिएका छन्।
किन प्रभावकारी भएन बीमा कार्यक्रम?
जाली उद्धारमा कारबाही नभए ‘बीमा सेवा नदिने’
बीमा समितिले गएको साउनमा जारी गरेको मापदण्डमा बीमा कम्पनीले दाबीको निवेदन प्राप्त भएको सात दिनभित्र बीमित व्यक्तिलाई भुक्तानी दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
कहिले पाउँछन् बीमितले पैसा?
वैशाखयता कोभिड-१९ बीमा सुरु भएपछि नेपालमा लगभग १५ लाख जनाले बीमा गराएको बताइन्छ।
बीमा समितिले ल्याएको कोरोना बीमासम्बन्धी मापदण्डमा व्यक्तिगत र सामूहिक बीमाको प्रावधान समेटिएको थियो।
त्यसले नेपालमा काम गरिरहेका २० वटा बीमा कम्पनीहरूलाई एक लाख रुपैयाँ र ५०,००० रुपैयाँ बराबरका दुई प्रकारका बीमा विक्री गर्न बाटो खोलिदिएको थियो।
तर सरकारको वार्षिक बजेटमा सामूहिक बीमामा अनुदान उपलब्ध गराउने घोषणा गरेपछि हाल व्यक्तिगत बीमाको व्यवस्था हटाइएको बताइन्छ।
उक्त मापदण्डले गरेको अनुदान र सरकारले आर्थिक दायित्व लिने व्यवस्थालाई कानुनी चुनौती दिँदै दायर गरिएको रिट अझै सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ।
मापदण्डमा कोभिड-१९ का सन्दर्भमा अढाइ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बीमा दायित्व भएको अवस्थामा नियमनकारी निकाय बीमा समितिले र साढे तीन अर्बभन्दा माथिको हकमा नेपाल सरकारले बेहोर्ने उल्लेख गरेको छ।